We Fight We Win. -- " More than Media ": ဒုတိယဗိုလ်မှုးကြီးကျော်ဆန်း (အငြိမ်းစား)၏ NLD မှ နှုတ်ထွက်စာ
ဒုတိယဗိုလ်မှုးကြီးကျော်ဆန်း (အငြိမ်းစား)၏ NLD မှ နှုတ်ထွက်စာ
by Thway Thit Sar on Sunday, April 22, 2012 at 11:09pm ·
အောက်ပါ အကြောင်း အရာများသည် ကာယကံ ရှင် ကိုယ်တိုင် ခွင့်ပြုပါသဖြင့် တင်ပေးလိုက် ခြင်း ဖြစ်ပါသည် ဟူ၍ သိရှိရပါသည်... ဤကိစ္စပါ အကြောင်း အရာများ ကို ဘယ်သူ့အရိပ်မှ လွှမ်းမိုးခြင်း မ၇ှိပဲ ဖတ်ရူ့ပြီး သိရှိ နားလည် နိုင်ကြပါစေ....
NLD ဟာ ဒီမိုကရေစီ နည်းကျ မကျ ဆုံး ဖြတ်ကြည့်ကြပါ... အားလုံး ၀ိုင်းဝန်း ညိုနိုင်းဆွေးနွေးပြီး အားလုံးရဲ့ သဘော ဆန္ဒအရ လုပ်ဆောင် ခြင်းက ဒီမိုကရေစီရဲ့ အနှစ် သာရ တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ အတွက် ကြောင့် ဒီမိုကရေစီ စစ်စစ် ပါတီပါဆိုတဲ့ NLD မှာ ဒီလို ဒီမိုကရေစီရဲ့ အနှစ် သာရမရှိပဲ လက်အောက် ငယ်သားတွေရဲ့ ကြိုးစား အားထုတ်ခွင့် ဆန္ဒတွေ ဖော်ထုတ်ခွင့် မရှိပါဘူး... ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ NLD မှာ ဗဟိုကြီး ဆိုတဲ့ အာဏာရှင်ပါတီ တစ်ခု ဖြစ်နေလို့ပါ... အဲဒီအထဲကမှ ဒေါ်စုရဲ့ အမိန့်၊ စကား တစ်ခွန်းဟာ.. NLD ပါတီတစ်ခုလုံးကို မလှန်နိုင်အောင် ၊ ပြန်မဝေဖန်ရဲအောင် ဖြစ်နေလျှက်ရှိပါတယ်... ပြန်ဝေဖန်လို့လဲ မရ မှားလားမှန်လား အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးလို့မရပဲ... ဒေါ်စု တစ်သံ ဒေါ်စု တစ်မိန့် လုပ်နေတဲ့ ပါတီ တစ်ခုလို ဖြစ်နေပါတယ်... မှန်လား မှားလား ဆိုတာကတော့ ကိုယ်တိုင်ပဲ လေ့လာဆုံး ဖြတ်ကြည့်ကြပါ... ဒေါ်စုက အမှားနဲ့ မကင်းတဲ့ လူသား တစ်ယောက်ပါ နတ်ဒေ၀ါမဟုတ်သလို၊ ဒုတိယ ဘုရားသခင်လဲ မဟုတ်ပါဘူး... ဝေဖန်ခွင့်နဲ့ ပြန်လည်ဆွေးနွေး တင်ပြခွင့်တွေ တော့ ရှိရမှာပါ.. ဒီမိုကရေစီ အရေး ဖော်ဆောင်နေပါတယ် ဆိုတဲ့ အဖွဲ့ကြီးက ဒီလို တွေ ဖြစ်နေတာ တော့ မကောင်းပါဘူး.. တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုး အတွက် ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာကို လက်တွေ့ကျကျ ကျင့်သုံးပြီး ဖော်ဆောင်တာလား? ကိုယ်တွေ အာဏာရဖို့နဲ့ လုပ်ချင်တာတွေကို လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်နိုင်ဖို့ ဒီမိုကရေစီကိုကျင့်သုံးပြီး ဖော်ဆောင်နေတာလား လို့ပဲ မေးလိုက်ချင်ပါရဲ့ဗျာ...
မင်းလိုချင်တဲ့ ဒိမိုကရေစီမျိုး ချက်ခြင်းရအောင် ကြံ့ဖွတ်ပါတီ ဒါမှမဟုတ် စစ်တပ်ထဲသာ ဝင်လိုက်ကွာ။
22 April 2012 at 23:46
23 April 2012 at 02:44
What is the intention of moe thee zun??? sometime seem childish.
23 April 2012 at 05:39
ဘယ်သူက ကျမကို နိုင်ငံရေးမလုပ်တက်ဘူးလို့ပြောတာလဲ။ လုပ်လာတာအံတိုနေပြီ။
- ရှင်ကရောဘာလုပ်လို့လဲ။ ( လူထုကတာဝန်ကျေစွာတခဲနက်မဲပေးပြီးပြီ။ )
- ကျမတစ်ယောက်ထဲလုပ်လို့မရဘူးရှင့်။ ( ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာအမိန့်ပေးပါ။)
- နိုင်ချင်ရင်ကိုယ်တိုင်ဝင်ထိုးပါ့လား။ ( အပြောင်းအလဲလိုချင်ရင်ကိုယ်တိုင်လုပ်။)
- ပြောရတာလဲမောပြီ။ ဒီညနေဦးသန်းစိန်နဲ့ ကျားထိုးဖို့ချိန်းထားလို့သွားလိမ့်အုံးမယ်။
- ဒီတစ်ခါကျမနိနုင်မယ်လို့ လုံးဝအာမခံတယ်။ (ကျမတို့နိုင်ငံအပြောင်းအလဲကို ဦးတည်နေပြီ။
အန်တီလုပ်တာ အန်တီတာဝန်ယူတယ်။ အန်တီမှားရင်အန်တီခံမယ်။)
( စစ်တပ်က ဒီမိုကရေစီပေးလိမ့်မယ်။ မပေးရင်ငါ့ကိုယ်ငါ ရေနံဆီလောင်းပြီးမီးရှို့ပြမယ်။ ဦးအောင်ကြီး
- ၁၉၈၈ )
လူထုမှတ်ချက်။ ။ ရှုံးပြီးပြန်လာရင် ကျမတစ်ယောက်တည်းလုပ်လို့မရဘူး။ အားလုံးဝိုင်းလုပ်ရမယ်။
NLD ဟာ ဒီမိုကရေစီ နည်းကျ မကျ ဆုံး ဖြတ်ကြည့်ကြပါ... အားလုံး ၀ိုင်းဝန်း ညိုနိုင်းဆွေးနွေးပြီး အားလုံးရဲ့ သဘော ဆန္ဒအရ လုပ်ဆောင် ခြင်းက ဒီမိုကရေစီရဲ့ အနှစ် သာရ တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ အတွက် ကြောင့် ဒီမိုကရေစီ စစ်စစ် ပါတီပါဆိုတဲ့ NLD မှာ ဒီလို ဒီမိုကရေစီရဲ့ အနှစ် သာရမရှိပဲ လက်အောက် ငယ်သားတွေရဲ့ ကြိုးစား အားထုတ်ခွင့် ဆန္ဒတွေ ဖော်ထုတ်ခွင့် မရှိပါဘူး... ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ NLD မှာ ဗဟိုကြီး ဆိုတဲ့ အာဏာရှင်ပါတီ တစ်ခု ဖြစ်နေလို့ပါ... အဲဒီအထဲကမှ ဒေါ်စုရဲ့ အမိန့်၊ စကား တစ်ခွန်းဟာ.. NLD ပါတီတစ်ခုလုံးကို မလှန်နိုင်အောင် ၊ ပြန်မဝေဖန်ရဲအောင် ဖြစ်နေလျှက်ရှိပါတယ်... ပြန်ဝေဖန်လို့လဲ မရ မှားလားမှန်လား( အန်တီလုပ်တာ အန်တီတာဝန်ယူတယ်။ အန်တီမှားရင်အန်တီခံမယ်။)
23 April 2012 at 06:19
Everyone has his own believe. If one thinks this is the right way for good sake, then he should not be blamed for that. If you don't believe in the ideology of other people for good sake, you will not be blamed either. However as longer as everyone including you are doing something for good sake, our country will be moved forward.
You leaders !!( you think you are one of the leaders) Please stop blaming other.
I feel so embarrassed to read those articles especially this time. Please Please Please.
23 April 2012 at 21:38